ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် Golden Visa မှနေထိုင်ခွင့်
အကောင်းဆုံး ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်အတွက်ကိုယ်စားလှယ်များ နှင့်ရှေ့နေများ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှုနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစားများဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိနေထိုင်မှုအစီအစဉ်များသည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များ၏နေထိုင်မှုသည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဒုတိယနေထိုင်မှု၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှုနှစ်ခု၊ , ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ယာယီနေထိုင်မှု၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနိုင်ငံသား၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသား၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိစီးပွားရေးနိုင်ငံသားအစီအစဉ်၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှစ်ခု၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သောနိုင်ငံနှင့်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိသံတမန်ဆိုင်ရာဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်နိုင်ငံသားခံယူထားသည့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်နှစ်ဆရွှေဗီဇာ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသားနှင့်ရွှေဗီဇာ၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်နေထိုင်ခွင့်နှင့်ရွှေဗီ၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ရွှေဗီဇာနိုင်ငံ၊ ဆွစ်ဇာလန်ရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊
နောက်ထပ်အထောက်အပံ့ဖြင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏ Residency အားလုံးအတွက်“ 1 stop solutions” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - တစ်နှစ်လျှင် CHF ၂၁၀၀၀
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏အရွယ်အစားသေးငယ်မှု - ၎င်း၏ဒေသတစ်ခုလုံးသည်စကော့တလန်၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းနှင့်နီးကပ်စွာတည်ရှိပြီး၎င်း၏လူ ဦး ရေသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်ကိုအနည်းငယ်သာသိသာစေသည်။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသည် caliber နှင့်ထိရောက်သောဆေးကုသမှုအတွက်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားခဲ့သည်။ အမေရိကန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအလယ်အလတ်ရှိသော်လည်းကျန်းမာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများသည်အခမဲ့သို့မဟုတ်ငွေကြေးအမြောက်အများရှိသောနိုင်ငံများမှနေထိုင်သူများသည်လိုအပ်သောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလွှမ်းခြုံမှုအတွက်တစ်လမှတစ်လကုန်ကျစရိတ်ကိုအလွန်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်တွေ့ရလိမ့်မည်။ လေးယောက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည်အမှန်တကယ်စံသတ်မှတ်ထားသောကာကွယ်မှုအတွက်လစဉ်ဒေါ်လာ ၈၀၀ ကျော်သုံးစွဲနိုင်သည်၊ နေထိုင်သူအားလုံးသည်ဆေးကုသမှုခံယူရမည်၊ သင်နေထိုင်ရန်သင့်နေထိုင်မှု၏ကန ဦး သုံးလကိုသင့်အားပေးရမည်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်သင်ကြားပို့ချမှုစံသည်မြင့်မားသော်လည်းကျောင်းများအတွက်ကန်တန်များသည်တာ ၀ န်ယူမှုရှိခြင်းကြောင့်အနှစ်ချုပ်ရန်ခက်ခဲသည်။
မူကြိုကျောင်းများသည်နိုင်ငံနယ်မြေအများစု မှလွဲ၍ အရာအားလုံးတွင်တည်ရှိပြီးအခမဲ့ဖြစ်သည် (ရပ်ကွက်ကော်မတီမှလုပ်ဆောင်သည်) ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ငယ်ရွယ်သောကလေးများအတွက်အစိုးရပိုင်ပျိုးခင်းသို့မဟုတ်ကျူရှင်မရှိပါ။ ငယ်ရွယ်သောအရွယ်မတိုင်မီကကျောင်းသားများအတွက်အလယ်အလတ်ကလေးစောင့်ရှောက်မှုမရှိခြင်းသည်ပုံမှန်ကန့်ကွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံခြားသားများသည်ကလေးများ၏“ streaming” ကိုပုံမှန်မှတ်ချက်ပေးသည် - လူငယ်များသည်သူတို့၏စွမ်းရည်ပေါ် မူတည်၍ ခွဲခြားထားသည်။ streaming များအတူတူပင်ဟောင်းသောအရာ - အချို့သော Canton ၌ဤ 10 သို့မဟုတ် 11 ကဲ့သို့နုပျိုဖြစ်ပျက် - သူသည်ဟောင်းအုပ်ထိန်းသူများအတွက်သိသိသာသာရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ အနိမ့်ကျသည်သူ၏အနာဂတ်ဆီသို့ ဦး တည်သွားနိုင်သည်ဟုထင်ပြီးလမ်းပေါ်တွင်သူ၏လမ်းကြောင်းကိုထပ်မံရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်ဟူသောအယူအဆသည်ဤတွင်မျက်နှာသာများစွာရှာတွေ့သည်မဟုတ်။
ကောလိပ်ကျောင်းသည်လူနည်းစုအတွက်ဖြစ်သည်။ ဆွစ်ဇာလန်ကလေး ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျောင်းများသို့မဟုတ်ထိုအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်ပြင်ဆင်ထားကြသည်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသည်အစိုးရမဟုတ်သည့်ကျောင်းများ၊ ကမ္ဘာချီအလှူငွေများ၊ ဗြိတိန်နှင့်အမေရိကန်အခြေစိုက်သင်တန်းများအတွက်လျောက်ပတ်သောဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပေးသည်။ အကုန်အကျများသော်လည်းအမှန်တကယ်တွင်မြောက်မြားစွာသောကံစမ်းမဲမြောက်မြားစွာသည်၎င်းတို့အားသူတို့၏ရွှေ့ပြောင်းမှုအထုပ်တွင်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ထားရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ သူတို့ကမင်းကိုမလာမချင်းသူတို့ဆီကိုမလာဘူးလား၊ Espresso၊ ပီဇာ၊ ဒါမှမဟုတ်သူတို့နဲ့ရင်းနှီးအောင်လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းတခုခုမှာအသားကင်တဲ့ညစာစားပွဲကိုသင်ကြိုဆိုတဲ့အခါသင့်ကိုလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေကောင်းကောင်းတုံ့ပြန်လိမ့်မယ်။ သင်သည်အလားတူညနေခင်းအတန်းများကိုတက်ရောက်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဂိမ်းကလပ်တစ်ခုသို့ဝင်နိုင်ပြီး၊ ထိုထက်ကား - ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုရနိုင်သည်။ ဆွစ်ဇာလန်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်လူတစ် ဦး နှင့်လူတစ် ဦး ချင်းဆက်သွယ်မှု၏အရေးပါမှုကိုသင်သိသောအချိန်တွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအရေအတွက်ကို“ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်းကိုမည်သူသိသနည်း” ဖြင့်ဖြည့်စွက်ထားသည်။ စဉ်းစားရန်မကြိုးစားပါနှင့်။ သင်ပြောနေတာကိုနားမလည်သည်ဖြစ်စေ၊ အနီးအနားရှိကွန်ယက်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကလေးများကျောင်းရှိထူးခြားသည့်စုရုံးမှုများသို့သွားပါ။ သင်၏ပျက်ကွက်မှုကိုသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ ရောနှောခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ အဓိကထောက်ခံချက်ချက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သံကြိုးဖြင့်သံကြိုးတပ်ပြီးအချိန်ငါးမိနစ်အလိုနောက်မှသာပုံမှန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဆွစ်ဇလန်လယ်သမားသည်ကျော်ကြားမှုနှင့်ကံကြမ္မာနှင့်မတိမ်းမယိမ်းဖြစ်နေသည်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သူတစ်ယောက်အနေနှင့်သင်သည်ဆွစ်ဇာလန်စာရင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဘဏ်များသည်လယ်ဂျာနှင့်ခရက်ဒစ်သို့မဟုတ်ချက်လက်မှတ်ကဒ်များအတွက်ငွေသွင်းသည်။ သူတို့ရရှိနိုင်သည့်ပလပ်စတစ်အခြားရွေးချယ်စရာများမည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ၊ အင်တာနက်တီထွင်မှု၊ တိုက်ရိုက်အားသွင်းခြင်းနှင့်ဖုန်းဘဏ်လုပ်ငန်းများ - ဆွစ်ဇာလန်မြောက်မြားစွာသည်ငွေရေးကြေးရေးဘက်သို့ ဦး တည်နေပုံရသည်။ လတိုင်း၏ပြီးဆုံးခါနီးတွင်စာတိုက်သိုလှောင်ခန်းများ၌ tabs များကိုငွေသားများဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနှင့်မြို့ပြအသိုင်းအဝိုင်းများအတွင်းခိုင်မာသောအများပြည်သူသုံးမော်တော်ယာဉ်များတစ်လျှောက်လုံးတွင်ထူးကဲသောရထားဘောင်ရှိသည်။ အထူးသဖြင့်မှတ်သားထားသည့်ကဒ်ပြားတစ်ခုဖြင့်ရထားများသည်အလွန်တန်ဖိုးရှိကြောင်းပြောသည့်ကြားမှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ကေဘယ်လ်ကားများသည်လက်မှတ်တစ်စောင်အတွက်အကုန်အကျများပါသည်။ cantons မြောက်မြားစွာတွင် 70 နှစ်အောက်ကလေးများသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ သမိုင်းကြောင်းအရဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသည်ဘက်မလိုက်ခြင်းနှင့်တိတ်ဆိတ်ခြင်းကြောင့်လူသိများသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ လူမှုရေးနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာအပြုအမူအနည်းငယ်သည်နိုင်ငံအတွင်းသင်၏နေထိုင်မှုသည်အလားတူပင်တိတ်ဆိတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်သိနိုင်သည်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသည်သူတို့၏နာရီများကြောင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက်လူသိများသည်ဟုသင်ထင်ကောင်းထင်ပေမည်။ သို့သော်အချိန်မီရောက်ရှိရန်ဆန္ဒသည်ထိုထက်မကပါ။ စီးပွားရေးလောကတွင်စုဝေးမှုများသည်အချိန်ဇယားအတိုင်းစတင်သည်။ ၎င်းကိုနောက်ကျရန်အပျော်တမ်းအဖြစ်ရှုမြင်သည်။ အမှန်စင်စစ်လူမှုရေးကတိကဝတ်ပြုခြင်း၌ပင်နောက်ကျခြင်းကိုမယဉ်ကျေးဟုရှုမြင်သည်။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အခြေခံအသေးစိတ်
တစ်နှစ်လျှင် CHF ၂၁၀၀၀
D ဗီဇာသို့မဟုတ်နေထိုင်ခွင့်ပါမစ်သို့မဟုတ်ဆွစ် C ဗီဇာ
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အချိန်ထုတ်ယူခြင်း
သဘာဝအားဖြင့်မပြတ်မတောက်နေထိုင်မှု၏ 12 နှစ်ပြီးနောက်
> ဆွစ်ဇာလန်နေထိုင်ခွင့်အစီအစဉ် ("Lump sum taxation")
> Swiss Business Investor အစီအစဉ်
အဘယ်ကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ဘို့သွားရ
ဆွစ်ဇာလန်သည်ဥရောပ၏နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာ့အဆင့်မီဘဏ္financeာရေးစနစ်၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားခြင်း၊ ပြီးပြည့်စုံသောပညာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုများကြောင့်ကျော်ကြားသည်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသည် Schengen ဇုန်တွင်နေထိုင်သူဖြစ်ပြီးနေထိုင်သူများနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်ဗီဇာမဲ့ခရီးသွားလာခြင်းကိုအတည်ပြုသည်။ နိုင်ငံ၏ရွှေနေထိုင်မှုအစီအစဉ်သည်ပညာတတ်။ အောင်မြင်သောပုဂ္ဂိုလ်များကိုရည်ရွယ်သည်။ ၎င်းသည်လျှောက်ထားသူနှင့်သူ၏မိသားစုအတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသားနေထိုင်ခွင့်ကို ၂-၄ လအတွင်းထုတ်ပြန်သည်။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏ရွှေဗီဇာလျှောက်ထားမှုတွင်လျှောက်ထားသူ၏အနီးကပ်မိသားစုဝင်များဖြစ်သည့်ဇနီးမောင်နှံနှင့် ၁၈ နှစ်အောက်ကလေးငယ်များပါဝင်သည်။
Residency ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် insite
အကယ်၍ သင်သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ရန်လျှောက်ထားလိုလျှင်သင်သည်အသက် ၅၅ နှစ်အောက်ဖြစ်ပြီးရာဇ ၀ တ်မှုမရှိပါ။ လျှောက်လွှာတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်တင်းကြပ်သောအင်တာဗျူးတစ်ခုလည်းပါဝင်ပြီး၎င်းသည်အခြားရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များထက် ပို၍ ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်သည်အလွန်လျင်မြန်ပြီး ၂ လမှ ၄ လအထိကြာပြီးခံယူချက်နှင့်နေထိုင်ခွင့်ရရှိသည်။
ဆွစ်ဇာလန်နေထိုင်ခွင့်အစီအစဉ် ဤအစီအစဉ်အရဆွစ်ဇာလန်၌နေထိုင်သောဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသို့ငွေကျပ်သိန်း ၂၀၀,၀၀၀ ကိုတစ်လုံးတည်းအခွန်အဖြစ်ပေးရမည်။ Canton ပေါ် မူတည်၍ ဤပမာဏသည်တစ်နှစ်လျှင် CHF ၄၀၀၀၀၀ မှ CHF ၆၀၀၀၀၀ အထိရှိနိုင်သည်။ သင်ဤအစီအစဉ်အောက်တွင်အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ
ဆွစ်ဇာလန်စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအစီအစဉ် အီးယူမဟုတ်သောနိုင်ငံသားများသည်ဆွစ်ကုမ္ပဏီအသစ်တစ်ခုကိုတည်ထောင်ရမည်၊ သို့မဟုတ်လက်ရှိဆွစ်ကုမ္ပဏီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမည်။
ကြိုတင်ခွင့်ပြုထားသောလုပ်ငန်းတစ်ခုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်အနည်းဆုံး CHF ၁ သန်းလိုအပ်လိမ့်မည်။ သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်လက်ရှိအလုပ်များကိုထိန်းသိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်အသစ်များဖန်တီးခြင်း၊ နည်းပညာအသစ်များသို့မဟုတ်ဒေသ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားဖြင့်ရပ်ရွာအတွက်အကျိုးရှိကြောင်းသက်သေပြရမည်။ သင်နေထိုင်မည့်ဒေသတွင်သင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသင့်သည်။ သင်နေထိုင်သည့်ကာလအတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုထိန်းသိမ်းထားရမည်။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နေထိုင်ခွင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များကသည် နှင့် နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအဘို့ ဖောက်သည်များနှင့်ဆွစ်ဇာလန်ရှိသူတို့၏မိသားစုများကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအထောက်အပံ့၊ ဆွစ်ဇာလန်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုနိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံမှထောက်ပံ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှ Golden Visa ဖြင့်နေထိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ရုံသာမကဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုလည်းကူညီပေးပါသည်။ ဆွစ်ဇာလန်သို့မဟုတ်ကမ်းလွန်၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့်ငွေရေးကြေးရေးစီမံကိန်းနှင့်အခြားများစွာပါဝင်သည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ရာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်နိုင်မှတဆင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအဘို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်၊ ဆွစ်ဇလန်အတွက်တတ်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများကတတ်နိုင်သောနေထိုင်ခွင့်၊
ဆွစ်ဇာလန်မှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာ။
နိုင်ငံသား ၃၇ နိုင်ငံသို့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
ဆွစ်ဇာလန်မှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဇလန်တွင်အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှပြန်လည်အမြတ်အစွန်းရရှိသင့်သည်ဟူသောရှုထောင့်နှင့်အညီပံ့ပိုးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီအနည်းငယ်နှင့်ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိကောင်းမွန်သောနေရာများတွင်တည်ရှိပြီးအကောင်းဆုံးအကျိုးအမြတ်များကိုရရှိစေသည်။
သိရန်လိုအပ် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဆွစ်ဇာလန် Residency
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေ၏နေထိုင်မှုသည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏အောင်မြင်သော Residency အတွက်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များကိုပေးလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency ဖြင့်နေထိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
မည်သည့်အကြံပြုချက်များကို အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ဆွစ်ဇာလန်သို့မဟုတ်ဆွစ်ဇာလန်သို့ပြောင်းရွှေ့ရန်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်လိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ Residence Permit ရယူရန်နှင့်ဖောက်သည်များအားဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ကိုအကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံစာပြင်ဆင်ရန်နှင့်ငြင်းဆန်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက် First Diligence ကိုပြုလုပ်သည်။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်လုံ့လဝီရိယရှိရှိလေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
သင်၏ Residency ကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့သို့လျှောက်လှမ်းနိုင်ရန်အတွက် client နှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကို scan ဖတ်ရန်လိုအပ်သည်။
စာရွက်စာတမ်းများဘာသာပြန်ခြင်းနှင့် Apostille ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်လွှာအားဖြင့်နေထိုင်ခြင်း။ Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးရှေ့နေများသည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့်ရွှေဗီဇာဖြင့်ဖြည့်သည့်ပုံစံများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုကူညီလိမ့်မည်။
သင်နှင့်သင်၏မိသားစုနေထိုင်မှုပုံစံအတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့် Residency အတွက်မှတ်တမ်းတင်ပြီးသည်နှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့ဖြည့်ပါလိမ့်မည်။
သင်၏ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency လျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းကောင်းကိုသင်နှင့်အခြားအထောက်အပံ့များအတွက်စတင်ပြင်ဆင်နေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများမှအောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား Residency ကိုထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နေထိုင်ခွင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ကုန်သည်များသို့မဟုတ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှလက်နက်များနှင့်ခဲယမ်းမီးကျောက်ဖြန့်ဖြူးသူများအားကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် ဆွစ်ဇာလန်တွင်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆွစ်ဇာလန်သို့ဖြစ်စေ၊ သို့ဖြစ်စေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များကိုစက်မှုဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံသည် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်တရားမဝင်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအဘို့ ဆွစ်ဇာလန်ရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူတစ် ဦး ချင်းအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် ကုန်သွယ်မှု၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့ပြုလုပ်သောဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်တစ် ဦး ချင်းအတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်အထောက်အပံ့မရရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအဘို့ တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နေထိုင်ခွင့် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအဘို့ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ဆွစ်ဇလန် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိညစ်ညမ်းစာပေများကိုရောင်းဝယ်သူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်ခွင့် ဆွစ်ဇာလန်အတွက်ရှေ့ရပျ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမထောက်ပံ့ပါနှင့်။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည်ဆွစ်ဇာလန်နှင့် KYC အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုတိကျသေချာစေရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော်လည်းဆွစ်ဇာလန်ရှိအာဏာပိုင်များမှလျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုရန်ငြင်းပယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်။ နေထိုင်ခွင့် ဆွစ်ဇာလန်၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Residency မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံနှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏တရားဝင်လိုအပ်ချက်များဖြင့်ကျွနု်ပ်တို့၏အကောင်းဆုံးသောဖြေရှင်းချက်များကိုပြုလုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်နိုင်သောနှုန်းဖြင့်စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းကိုပေးသည်။
ဖောက်သည်များနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသို့ထောက်ပံ့ပေးသည့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသို့ dual Residency နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည်။
ဖောက်သည်များအားပံ့ပိုးမှုပေးသောဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများနှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်အတွေ့အကြုံရှိသော Residency ။
သင်၏ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်သင်၏ Residency မတိုင်မီနှင့်ခွင့်ပြုချက်အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအထောက်အပံ့အတွက်ထိုတွင်ရှိလိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဇာလန်အပါအ ၀ င်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency တွင်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံများရှိပြီးကမ္ဘာအနှံ့ရှိအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုကူညီသည်။
အမှု၌၊ သင်၏ဆွစ်ဇာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏ Residency ပျက်ကွက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံပေါင်း ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
နေထိုင်မှုအတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှ Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုတွက်ချက်ပါ
Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်တွက်ချက်ရန်မိသားစု ၀ င်များနှင့် ၄ င်းတို့၏အသက်အပါအဝင်အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုဖြည့်စွက်ပါ။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်နှင့် Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်အခြားစရိတ်များပါဝင်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအဘို့
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ခွင့်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသို့ချက်ချင်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုသာစာရင်းပြုစုထားသည်။
သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူဆွစ်ဇလန်နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေနှင့်၊ ဆွစ်ဇလန်တွင်တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်သင်လိုအပ်နိုင်သည့်အချိန်နှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးအပ်ရန်ရှိပါသည်။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများက Residency မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်စီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ ဆွစ်ဇာလန်နှင့်အခြားနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုအတွက်တစ်နေရာတည်းဖြစ်စေရန်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်အခြားအတိုင်ပင်ခံများကပေးသောထီးတစ်ချောင်းအောက်တွင်သင်ရှာမရနိုင်ပါ။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်မိသားစုများ၊ တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြုပ်နှံခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့်ဆွစ်ဇာလန်နှင့်နိုင်ငံတကာမှအကူအညီများဖြင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်၏ Residency ကိုကျော်လွန်သောလမ်းကိုထောက်ပံ့သည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် (သို့) Offshore နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ (ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပို၍ ဈေးချိုသည်။ )
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချမည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကောင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိကုမ္ပဏီဘဏ်စာရင်းနှင့်လည်းကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
Incase သင်အဘို့, ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်တိုင်ပင်လိုအပ်ပါတယ် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်သို့မဟုတ် crypto ဖြေရှင်းမှုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက် သင်စီစဉ်မယ်ဆိုရင်ဆွစ်ဇာလန် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိလက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ၀ ယ်ခြင်းဖြင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ ဆွစ်ဇာလန်၌ချက်ချင်းစတင်ဘို့။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ HR ဝန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် ဆွစ်ဇာလန်တွင်နေရာလွတ် post အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက် virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ကို virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
စာရင်းကိုင်, ဆွစ်ဇာလန်အတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
ဆွစ်ဇာလန်ရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက်, အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဆွစ်ဇလန်.
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော IT ဖြေရှင်းနည်းများကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ပေးသည်
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် Web ဒီဇိုင်း
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ App Development
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ရှေ့နေများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဖြေရှင်းမှုဖြင့်တရား ၀ င်နေထိုင်မှုကိုပေးစွမ်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဆွစ်ဇာလန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ ဆွစ်ဇာလန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။ ဆွစ်ဇာလန်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းချက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည် Client ၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။
သင်၏မိသားစုဝင်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများက Residency မှသင်၏ကိုယ်စားဥပဒေရေးရာဆောင်ရွက်မှုများအားလုံးအတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရှေ့နေကိုလိုအပ်သည်။ သင်ဆွစ်ဇာလန်သို့ရောက်နေလျှင်သို့မဟုတ်ဆွစ်ဇာလန်သို့သွားရန်စီစဉ်ထားပါကကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ရှေ့နေအားဤနေရာတွင်ရယူနိုင်ပါသည်။
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ထားပါကသင့်အားရှေ့နေအားဆွစ်ဇာလန်ပိုင်နက်တွင်အသုံးပြုရန်တရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ ၎င်းကိုအက်စတန်ဆွစ်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးကတရား ၀ င်ရယူပိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်တရားဝင်ဖြစ်စေသင့်သည်။
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ - ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်
ဆွစ်ဇာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းကိုဆွစ်ဇလန်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်ဖြင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏နေထိုင်မှုကိုရယူခြင်းဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဆွစ်ဇာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ရန်လျှောက်ထားခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများနှင့်အကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်နှင့်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်၌တည်၏။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခြင်း ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏နေထိုင်မှု | ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများမှနေထိုင်ခွင့် | ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများ၏နေထိုင်မှု
ဆွစ်ဇာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများမှနိုင်ငံသားအကောင်းဆုံးနှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများမှနိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားခြင်း။ အကောင်းဆုံးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များနှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီများ၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
စျေးသက်သာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ | စျေးနှုန်းချိုသာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆွစ်ဇာလန် | စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် | ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်စျေးချိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်လူကြိုက်များသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၊ စီးပွားရေး၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်ဖြင့်တရားဝင်နိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းစသည်ဖြင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသို့တရားဝင်နိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းစသည်ဖြင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားသည်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ ဆွစ်ဇာလန်၏အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများနှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အကြံပေးများ၊ ဆွစ်ဇာလန်၏အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှဆောင်ရွက်သည်
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှု ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံ
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များဖြင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရယူခြင်းဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဆွစ်ဇာလန်သို့ရွှေဗီဇာလျှောက်ထားခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံများ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဘာလဲ။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာတစ်နှစ်လျှင် CHF 200,000 ဖြစ်သည်။
သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်တရား ၀ င်အထောက်အပံ့ပေးပါသလား။
ဟုတ်တယ်၊ ဆွစ်ဇာလန်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့နေနဲ့ဆွစ်ဇာလန်မှာရှိတဲ့အေးဂျင့်တွေကဆွစ်ဇာလန်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုက Residency ကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်။
Residency သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် Residency သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်မြင့်မားပြီးအမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency မှဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြေးကိုသာပေးဆောင်ရသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက် Residency အတွက်အခြားအထောက်အပံ့များကိုလည်းပေးသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်သည်မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မဆိုနိုင်ငံသားများအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အာရှမှဆွစ်ဇာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အာဖရိကမှဆွစ်ဇာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဥရောပမှဆွစ်ဇာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ တောင်အမေရိကမှဆွစ်ဇာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ မလေးရှားမှဆွစ်ဇာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှဆွစ်ဇာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားမှဆွစ်ဇာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ သီရိလင်္ကာမှဆွစ်ဇာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ နီပေါမှဆွစ်ဇာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ အိန္ဒိယမှဆွစ်ဇာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency ယူအေအီးမှဆွစ်ဇာလန်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းညွှန်မှုအားဖြင့် Professional ကနေထိုင်မှု ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအဘို့
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency တွင်အရေးကြီးသောဝေါဟာရများ
link ကိုမှ ဆွစ်ဇာလန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန , ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရှိန်မြှင့်များအတွက်မူဝါဒများရေးဆွဲတာဝန်ရှိသည်